Ikhosi yeHydrosanitary Course Course isebenzisa iRevit MEP-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo yeHydrosanitary yezifundo zisebenzisa iRevit MEP
Funda ukusebenzisa REVIT MEP uyilo lokufakwa kococeko.
Wamkelekile kule khosi Izixhobo zococeko ezineRevit MEP.
Uya kulawula ukusuka kunxibelelwano ukuya kwindalo yezicwangciso.
Uya kufunda ngokuqhelekileyo, iprojekthi yokuhlala yokwenene yamanqanaba e-4.
Ndiya kukukhokela ngenyathelo ngenyathelo, andiyi kucinga ukuba uyazi nantoni na Hlaziya, nokuba malunga Ucoceko.
Ukuba uyazisola okanye akukhona oko ubukulindele, ungacela ukubuyela.
Iya kuqhubeka ikhula ngokuhamba kwexesha, yongeza ukuphuculwa kunye nohlaziyo.
QAPHELA: Umxholo we YouTubeKukufundisa ukuba uyisebenzisa kanjani inkqubo kodwa ayilungelelaniswanga kwaye awazi mithetho okanye ndlela yoyilo. Yazi indlela yokusebenzisa VUMELA I-MEP kukungazi IHydrosanitary, okanye naliphi na elinye isebe lobugcisa elinjengombane okanye ulwakhiwo. Ndiyakumema ukuba uzihlole ngokwakho.
Apha uya kufunda ukusebenzisa izixhobo eziyimfuneko ukwenza Iinqwelomoya ezinamanzi kuyo nayiphi na iprojekthi yokwakha. Umxholo wale khosi unokuhlelwa ngokwamacandelo ahlukeneyo, apho ngalinye liphuhlisa inqanaba elibalulekileyo le- uyilo lwe-hydrosanitary:
Amanzi abandayo kunye Namanzi ashushu aneRevit MEP.
Imodyuli yokuqala kwenkqubo I-BIM ene-Revit: Ukufakwa kococeko.
Apha uya kufunda ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo ukuqala iprojekthi ngaphakathi Hlaziyaumthwalo iintsapho zempilo kwaye uyile iinkqubo ezishushu kunye nezibandayo zamanzi. Uya kufunda nokuzijonga ngokwakho ezi nkqubo ngezixhobo zokubala ezibonelelwa yile nkqubo.
Icandelo lokuqala - Intshayelelo kunye nezixhobo:
Funda ukulayisha isicwangciso sokwakha kunye nezixhobo zangasese.
Icandelo lesibini-IiNkqubo zePayipi:
Funda ukulayisha kunye nokudibanisa imibhobho ngesandla kwaye ngokuzenzekelayo.
Icandelo lesithathu-Amanzi ashushu kunye neeDayimitha:
Funda ukudibanisa amanzi ashushu kwaye ubale iidayimitha ngokuzenzekelayo.
Ukulungiswa kobungakanani bamanzi kunye nokufakwa umoya ngaphakathi kweRevit MEP.
Imodyuli yesibini kwenkqubo I-BIM ene-Revit: Ukufakwa kococeko.
Apha uya kufunda ukusebenzisa izixhobo eziyimfuneko ukwenza Iinkqubo zokuhambisa amanzi kunye neendlela zomoya, kubandakanya izinto ezibalulekileyo ezinje ngee-siphons. Ukongeza, uya kuba nesakhono sokuyila imifanekiso ephindaphindayo yoyilo ukuze usebenze iiprojekthi zeesymetrical kunye nezakhiwo ngokukhawuleza.
Icandelo lokuQala - iDrains:
Funda ukubeka imingxunya kwaye wenze iinkqubo zokuhambisa amanzi
Icandelo lesiBini - iSiphons:
Funda ukuhlela iintsapho kunye nokulungisa uphazamiso phakathi kweenkqubo.
Icandelo lesithathu - iinguqulelo:
Funda ukwenza iikopi ezimbini zoyilo xa usebenza nezakhiwo okanye izilwanyana.
Icandelo lesine - Uvavanyo lokuphefumla:
Funda ukwenza iindlela zokunxibelelana ukuze zibaxhume kwinkqubo yokuntywila.
Amacandelo e-Hydrosanitary kunye neRevit MEP.
Imodyuli yesithathu kwenkqubo I-BIM ene-Revit: Ukufakwa kococeko.
Apha uya kufunda ukulayisha okanye imodeli iimpompo, ii-autoclaves, iitanki, iilog, i-septic, imigibe yegrisi kunye nezinye izinto hydrosanitary ngeendlela ezahlukeneyo
Icandelo lokuQala - amaCandelo oBonelelo:
Funda ukulayisha iibhombu kunye neetanki. Kwakhona funda ukumisela imithombo yequla.
Icandelo lesiBini - amaQokelela aQokelelayo:
Funda ukumisela iirekhodi kunye nemigibe yegrisi ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukudalwa kwezicwangciso ngeRevit MEP.
Imodyuli yesine kwenkqubo I-BIM ene-Revit: Ukufakwa kococeko.
Apha uya kufunda ukwenza iilebheli, iifowuni, amacandelo, iitafile, iinkcukacha kunye nezinye izinto eziyimfuneko xa kusenziwa intetho Iinqwelomoya ezinamanzi yayo nayiphi na iprojekthi yokwakha.
Icandelo lokuQala - iziCwangciso, iilebheli kunye neeCingo:
Funda ukulebhelisha iibhobho kunye nezixhobo, ukongeza amanqaku obuchwephesha kunye nokusebenza ngezikali ezahlukileyo kwiplanti enye.
Icandelo lesibini-iitheyibhile, amaCandelo kunye neenkcukacha:
Funda ukukwenza umlinganiso wezinto ngeetafile zobungakanani kwaye ungenise iinkcukacha ezibalulekileyo kwimithombo yangaphandle eyahlukileyo.
QAPHELA: Le khosi yaqulunqwa nohlobo lwe2018. I-99% yomxholo uhlala uhleli, nangona kunjalo jonga iiforamu zengxoxo malunga naluphi na utshintsho olubalulekileyo.
Fumana ilayisensi yomfundi yokuhlaziya
Misela iprojekthi yokuhlaziya
Yenza, usebenze kwaye uhlengahlengise iinkqubo ze-hydrosanitary
Ulwazi olusisiseko lweRevit luyacetyiswa, kodwa akuyimfuneko.
Ulwazi olusisiseko loFakelo lwezoCoceko luyacetyiswa, nangona kungekho mfuneko.
Ubunjineli bobuNjineli okanye bokwakha
Ubunjineli okanye abafundi boYilo
Ukucwangcisa iincibi zombhobho / kwi Plumbing
Abahwebi kunye nabavelisi beeNxalenye
Ikhosi ye-Civil 3D yemisebenzi yoluntu - iNqanaba loku-1